မြေမကျကန်ချက် (Volley Kick )နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမျိုးအစား ခွဲခြမ်းကြည့်လိုက်ရအောင်
Volley တွေကို အမျိုးအစား ခွဲခြမ်းကြည့်မယ်
17 Oct 2018 . 5:34 PM
ဘောလုံးပွဲတွေမှာ ခပ်မိုက်မိုက် သွင်းဂိုးတွေကို ပရိသတ်တွေ ကြည့်ခဲ့ရဖူးမှာပေ့ါ။ အဲဒီထဲကမှ မြေမကျကန်ချက် (Volley)နဲ့ သွင်းဂိုးတွေကို ကျွန်တော်တို့ အားအရဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဥပမာ လီဗာပူးလ်ဂန္ထ၀င် စတီဗင်ဂျရတ် Steven Gerrard ၊ မန်ယူကွင်းလယ်လူဟောင်း ပေါလ်စခိုးလ် Paul Scholes တို့လို Dynamic Kick တွေနဲ့ သွင်းခဲ့တဲ့ဂိုးတွေကို ကျွန်တော်တို့ အခုအချိန်အထိ လွမ်းမောနေရဆဲပဲ။ အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ရမယ့် Volley ဂိုးစာရင်းထဲမှာ ၂၀၀၂ ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲတုန်းက ရီးယဲလ်ဂန္ထ၀င် ဇီဒန်း Zidane သွင်းခဲ့တဲ့ဂိုး၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ နယူးကာဆယ်ကို သွင်းယူခဲ့တဲ့ မန်ယူတိုက်စစ်မှူး ရွန်နီ Rooney ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေကို မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းရမယ်။ ဒီတော့ မြေမကျကန်ချက် (Volley Kick )နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမျိုးအစား ခွဲခြမ်းကြည့်လိုက်ရအောင် . .
ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံးက မြေမကျကန်ချက်ဆိုရင် Volley လို့ပဲ လွယ်လွယ်ကူကူ သတ်မှတ်ထားကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ မတူညီတဲ့ ကွဲပြားမှုတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ကစားသမားတစ်ဦးက ဖြတ်တင်ပေးတာဖြစ်စေ၊ ခေါင်းနဲ့ တိုက်တာပဲဖြစ်စေ ပေးပို့တာကို နောက်ထပ်ကစားသမားက လေထဲမှာ ဘောလုံးရှိနေတုန်း မြေမကျကန်ချက်နဲ့ ဂိုးသွင်းခဲ့ရင် Volley ဂိုးလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ထင်သာမြင်သာအောင် ပြောရရင်တော့ ၂၀၀၂ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲတုန်းက ဇီဒန်း သွင်းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးလိုမျိးပါပဲ။ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဂျိမ်းစ်ရိုဒရီဂွက်ဇ် James Rodriguez သွင်းခဲ့တဲ့ဂိုးကိုလည်း Volley သွင်းဂိုးအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
၂၀၀၂ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ ဇီဒန်း သွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုး ကြည့်ရန်လင့်ခ်
၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဂျိမ်းစ်ရိုဒရီဂွက်ဇ် သွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုး ကြည့်ရန်လင့်ခ်
Half Volley ဂိုးဆိုတာက ဘောလုံးမြေကြီးပေါ် တစ်ခါထောက်ပြီး ပြန်မြောက်လာတဲ့အခါ ချိန်သားကိုက် ကန်သွင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်စက္ကန့်ရဲ့တစ်ဝက်လောက် ကြာပြီးမှ ကန်တာကိုတော့ Half Volley လို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး။ ပြောချင်တာက မြေကြီးပေါ်မှာ (၂)ခါလောက် ထောက်ပြီး ကန်တာကို ဆိုလိုတာပါ။ စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျမှာ ချယ်ဆီးအသင်းဘက်ကို နယူးကာဆယ်တိုက်စစ်မှူး ပါပစ်ဆီဆေး Papiss Cisse သွင်းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးလိုပါပဲ။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းဘက်ကို ပါပစ်ဆီဆေး သွင်းယူခဲ့တဲ့ ဂိုး ကြည့်ရန်လင့်ခ်
ဒါကတော့ မြေပေါ်မှာ ခုန်နေတဲ့ဘောလုံးကို Volley ကန်ချက်နဲ့ သွင်းယူတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် ဒီရာသီချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ် စပါးနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ပွဲတုန်းက ဘာစီလိုနာကွင်းလယ်လူ ရာကီတစ် Rakitic ကန်သွင်းခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ ဘောလုံးအခုန်မှာ ပြေးဝင်ကန်သွင်းခဲ့တဲ့ ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ အံ့အားသင့်ဖို့ကောင်းတာက ဒီလိုဂိုးမျိုးကို Volley သွင်းဂိုးအဖြစ် မသတ်မှတ်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီပုံစံကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် အမည်မပေးထားလို့ Volley လို့ပဲ ခပ်လွယ်လွယ် ခေါ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
စပါးအသင်းဘက်ကို ရာကီတစ် သွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုး ကြည့်ရန်လင့်ခ်
ဒီအဓိပ္ပါယ်က ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဘောလုံးကို မြှောက်တက်လာအောင် လုပ်ပြီးမှ ကန်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၀-၀၁ ရာသီက မန်ယူအသင်းဘက်ကို အွန်နရီ Thierry Henry ကန်သလိုမျိုးပါ။ ဒီလိုပုံစံ သွင်းဂိုးကိုလည်း Volley စစ်စစ်လို့ မသတ်မှတ်ပေမယ့် သီးသန့်ပေးထားတဲ့ နာမည်လည်း မရှိပါဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်ကတော့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် နာမည်ပေးသင့်နေပါပြီ။
မန်ယူအသင်းဘက်ကို အွန်နရီ သွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုး ကြည့်ရန် လင့်ခ်
ဘယ်လိုလဲ .. ပရိသတ်ကြီးရေ .. Volley ကန်ချက်တွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုံစံတွေ မတူဘူးဆိုတာ သိကြပြီနဲ့တူပါတယ်။ ဒါကို ဖတ်ပြီး နောက်တစ်ခါကျရင် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ငြင်းတဲ့အခါ ပြန်ရှင်းပြလို့ ရပြီပေ့ါ . .
Photo:YouTube,metro.news,The18,FC Barcelona Soccer Camps
Volley တှကေို အမြိုးအစား ခှဲခွမျးကွညျ့မယျ
ဘောလုံးပှဲတှမှော ခပျမိုကျမိုကျ သှငျးဂိုးတှကေို ပရိသတျတှေ ကွညျ့ခဲ့ရဖူးမှာပေ့ါ။ အဲဒီထဲကမှ မွမေကကြနျခကျြ (Volley)နဲ့ သှငျးဂိုးတှကေို ကြှနျတျောတို့ အားအရဆုံးဖွဈလိမျ့မယျ။ ဥပမာ လီဗာပူးလျဂန်ထဝငျ စတီဗငျဂရြတျ Steven Gerrard ၊ မနျယူကှငျးလယျလူဟောငျး ပေါလျစခိုးလျ Paul Scholes တို့လို Dynamic Kick တှနေဲ့ သှငျးခဲ့တဲ့ဂိုးတှကေို ကြှနျတျောတို့ အခုအခြိနျအထိ လှမျးမောနရေဆဲပဲ။ အကောငျးဆုံးလို့ သတျမှတျရမယျ့ Volley ဂိုးစာရငျးထဲမှာ ၂၀၀၂ ခနျြပီယံလိဂျ ဗိုလျလုပှဲတုနျးက ရီးယဲလျဂန်ထဝငျ ဇီဒနျး Zidane သှငျးခဲ့တဲ့ဂိုး၊ ၂၀၀၅ ခုနှဈမှာ နယူးကာဆယျကို သှငျးယူခဲ့တဲ့ မနျယူတိုကျစဈမှူး ရှနျနီ Rooney ရဲ့ သှငျးဂိုးတှကေို မဖွဈမနေ ထညျ့သှငျးရမယျ။ ဒီတော့ မွမေကကြနျခကျြ (Volley Kick )နဲ့ပတျသကျပွီး အမြိုးအစား ခှဲခွမျးကွညျ့လိုကျရအောငျ . .
ကြှနျတျောတို့တှေ အားလုံးက မွမေကကြနျခကျြဆိုရငျ Volley လို့ပဲ လှယျလှယျကူကူ သတျမှတျထားကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ မတူညီတဲ့ ကှဲပွားမှုတှေ ရှိပါသေးတယျ။ ကစားသမားတဈဦးက ဖွတျတငျပေးတာဖွဈစေ၊ ခေါငျးနဲ့ တိုကျတာပဲဖွဈစေ ပေးပို့တာကို နောကျထပျကစားသမားက လထေဲမှာ ဘောလုံးရှိနတေုနျး မွမေကကြနျခကျြနဲ့ ဂိုးသှငျးခဲ့ရငျ Volley ဂိုးလို့ သတျမှတျပါတယျ။ ထငျသာမွငျသာအောငျ ပွောရရငျတော့ ၂၀၀၂ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲတုနျးက ဇီဒနျး သှငျးယူခဲ့တဲ့ ဂိုးလိုမြိးပါပဲ။ ၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ဂြိမျးဈရိုဒရီဂှကျဇျ James Rodriguez သှငျးခဲ့တဲ့ဂိုးကိုလညျး Volley သှငျးဂိုးအဖွဈ သတျမှတျနိုငျပါတယျ။
၂၀၀၂ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲမှာ ဇီဒနျး သှငျးယူခဲ့တဲ့ဂိုး ကွညျ့ရနျလငျ့ချ
၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ဂြိမျးဈရိုဒရီဂှကျဇျ သှငျးယူခဲ့တဲ့ဂိုး ကွညျ့ရနျလငျ့ချ
Half Volley ဂိုးဆိုတာက ဘောလုံးမွကွေီးပျေါ တဈခါထောကျပွီး ပွနျမွောကျလာတဲ့အခါ ခြိနျသားကိုကျ ကနျသှငျးတာမြိုးဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈစက်ကနျ့ရဲ့တဈဝကျလောကျ ကွာပွီးမှ ကနျတာကိုတော့ Half Volley လို့ မသတျမှတျပါဘူး။ ပွောခငျြတာက မွကွေီးပျေါမှာ (၂)ခါလောကျ ထောကျပွီး ကနျတာကို ဆိုလိုတာပါ။ စတမျးဖို့ဒျဘရဈချြမှာ ခယျြဆီးအသငျးဘကျကို နယူးကာဆယျတိုကျစဈမှူး ပါပဈဆီဆေး Papiss Cisse သှငျးယူခဲ့တဲ့ ဂိုးလိုပါပဲ။
ခယျြလျဆီးအသငျးဘကျကို ပါပဈဆီဆေး သှငျးယူခဲ့တဲ့ ဂိုး ကွညျ့ရနျလငျ့ချ
ဒါကတော့ မွပေျေါမှာ ခုနျနတေဲ့ဘောလုံးကို Volley ကနျခကျြနဲ့ သှငျးယူတာဖွဈပါတယျ။ ဥပမာပွောရရငျ ဒီရာသီခနျြပီယံလိဂျပှဲစဉျ စပါးနဲ့ ဘာစီလိုနာအသငျးတို့ပှဲတုနျးက ဘာစီလိုနာကှငျးလယျလူ ရာကီတဈ Rakitic ကနျသှငျးခဲ့တဲ့ပုံစံမြိုးပါ။ ဘောလုံးအခုနျမှာ ပွေးဝငျကနျသှငျးခဲ့တဲ့ ပုံစံဖွဈပါတယျ။ အံ့အားသငျ့ဖို့ကောငျးတာက ဒီလိုဂိုးမြိုးကို Volley သှငျးဂိုးအဖွဈ မသတျမှတျတာပါ။ ဒါပမေဲ့ ဒီပုံစံကို သတျသတျမှတျမှတျ အမညျမပေးထားလို့ Volley လို့ပဲ ခပျလှယျလှယျ ချေါနကွေတာပဲဖွဈပါတယျ။
စပါးအသငျးဘကျကို ရာကီတဈ သှငျးယူခဲ့တဲ့ဂိုး ကွညျ့ရနျလငျ့ချ
ဒီအဓိပ်ပါယျက ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ ဘောလုံးကို မွှောကျတကျလာအောငျ လုပျပွီးမှ ကနျသှငျးတာဖွဈပါတယျ။ ၂၀၀၀-၀၁ ရာသီက မနျယူအသငျးဘကျကို အှနျနရီ Thierry Henry ကနျသလိုမြိုးပါ။ ဒီလိုပုံစံ သှငျးဂိုးကိုလညျး Volley စဈစဈလို့ မသတျမှတျပမေယျ့ သီးသနျ့ပေးထားတဲ့ နာမညျလညျး မရှိပါဘူး။ တဈယောကျယောကျကတော့ သတျသတျမှတျမှတျ နာမညျပေးသငျ့နပေါပွီ။
မနျယူအသငျးဘကျကို အှနျနရီ သှငျးယူခဲ့တဲ့ဂိုး ကွညျ့ရနျ လငျ့ချ
ဘယျလိုလဲ .. ပရိသတျကွီးရေ .. Volley ကနျခကျြတှကေို သတျမှတျထားတဲ့ ပုံစံတှေ မတူဘူးဆိုတာ သိကွပွီနဲ့တူပါတယျ။ ဒါကို ဖတျပွီး နောကျတဈခါကရြငျ ကိုယျ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ငွငျးတဲ့အခါ ပွနျရှငျးပွလို့ ရပွီပေ့ါ . .